War-murtiyeedka Ka Soo Baxay Shirkii Wada-hadalada S/land Iyo Somaliya Oo Guux Badan Abuuray Iyo Nuxurka Uu Xanbaarsan Yahay | Marsa News
War-murtiyeedka Ka Soo Baxay Shirkii Wada-hadalada S/land Iyo Somaliya Oo Guux Badan Abuuray Iyo Nuxurka Uu Xanbaarsan Yahay
Hargeisa:(Marsanews) War-murtiyeedka Shirka Guddida Heer Wasiir ee Wada-hadallada Somaliland iyo Soomaaliya, 22 June 2020 Iyada oo la tix-raacayo Shirkii Wada-tashiga Heerka Sare ahaa ee Wada-hadallada Somaliland iyo Soomaaliya ee ka qabsoomay Jabuuti 14 June 2020, ayna hogaaminayeen dalalka Jabuuti, Soomaaliya, Itoobiya iyo Somaliland.
Guddidii Heer Wasiir ee Wada-hadallada ee ay magacaabeen hogaamiyeyaashu waxa ay kulmeen 15-17 June 2020.Wufuuddii heer wasiir ee Somaliland iyo Soomaaliya waxa ay falan-qeeyeen arrimaha laga wada-hadlayey, iyada oo uu goob-joog yahay Dhex-dhexeediyaha shirka, ahna Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Jabuuti iyo Fudaydiyayaashii shirka ee ka socday Dalka Maraykanka iyo Ururka Midowga Reer Yurub.
Muddadii saddexda cisho ahayd ee ay socdeen wada-hadalladu, labada dhinac waxa ay is-waydaarsadeen aragtiyo dhawr ah oo ku saabsan arrimo xasaasi ah.
Waxa ay ku heshiiyeen nidaamka si wada-jir ah loogu wadi karo wada-hadalka (Common Conduct of Meetings), iyaga oo ay taageerayaan Dhex-dhexaadiyaha iyo Fudaydiyayaasha shirku.
Waxa ay muddo dheer ka doodeen tallaabooyinka lagu dhisi karo kalsoonida oo fure u ah horumar kasta oo laga sameeyo wada-hadallada. Labada dhinac waxa ay ku heshiiyeen in ay ka fogaadaan ficil kasta oo marin-habaabinaya wada-hadallada.
Marka laga hadlayo gar-gaarka bini-aadamnimo iyo deeqaha dhinaca horumarka, labada dhinac waxa ay ku heshiiyeen mabdi’iyan in aan la siyaasadayn arrintan, faah-faahinta arrintan waxa loo dhaafay Guddi Hoosaad Farsamo oo ka soo shaqaysa.
Labada dhinac waxa ay sidoo kale ku heshiiyeen in la aas-aaso Guddi Hoosaad kale oo Farsamo oo diirada saari doona in si wada-jir ah loo maamulo arrinta hawada ee somaliland iyo somalia .
Waxa intaas dheer, waxa ay labada dhinac ku heshiiyeen in la yagleelo Guddi Hoosaadka Farsamo ee dhinaca amniga si ay uga xaalaan arrimaha la xidhiidha amniga, Dhammaan Guddi Hoosaadyadan Farsamo waxa ay muddo laba wiig ah gudihii ku kulmi doonaan Jabuuti si ay uga shaqeeyaan in hore loo socdo iyo fulinta qodobbadii lagu heshiiyey.
Guddida Heer Wasiir ee Wada-hadalladu waxa ay dib ugu kulmi doonaan muddo 45 cisho gudaheed ah Jabuuti si ay dib-u-eegis ugu sameeyaan war-bixinaha Guddi Hoosaadyada iyo guud ahaan horumarka wada-hadallada. Ugu dambayn, labada dhinac waxa ay hoosta ka xariiqeen in ay daruuri tahay in la joogteeyo wada-hadalka iyo in lagu dhex shaqeeyo jadwal shaqo oo leh wakhti cayiman oo la isla ogol yahay si looga gaadho is-fahan wada-jir ah dhammaan arrimaha taagan iyo arrimaha masiiriga ah ee ku saabsan xidhiidhka Somaliland iyo Soomaaliya. War-murtiyeedku waxa uu ka soo baxay dalka Jabuuti, 22 June 2020.